❤️ UngaQhagamshelana njani nabaPhembeleli kwi-Instagram - Facebook
Ukuba ufuna ukunxibelelana neempawu ezinkulu kunye neempembelelo kwi-niche yakho kwi-Instagram, kukho izinto ezithile ekufuneka uyazi ukuthintela ukudutyulwa.
Kukho ngaphezulu kwesigidi sezigidi sabasebenzisi be-Instagram, kwaye ukuba ufuna ukufumana obu budlelwane nefuthe elikhulu okanye uphawu oludumileyo, kuyakufuneka ume ngaphandle kwaye uqiniseke ukuba uyaviwa. I-Instagram yenye yeendlela ezilungileyo zokunxibelelana nezinye iimveliso kunye nokwandisa imithombo yeendaba zentlalo kunye nobukho beshishini..
Eli nqaku limalunga neyona ndlela ingcono onokuyithatha ukuze ubambe umdla wabantu kwaye ubenze bonwabe ngokusebenza nawe.. Khumbula ukuba ezinye ze Iiakhawunti ezinkulu ze-Instagram izakufumana amakhulu emiyalezo yonke imihla, ke kubalulekile ukuba ume ngaphandle kwaye ubaxhome kwangoko.
Nxibelelana neBrand kunye neFluencers kwi-Instagram
Ukuba ucwangcisa ukuba nefuthe kwiiakhawunti ezinefuthe, nokuba yeyiphi ubukhulu bakho okanye ubungakanani bezi zinto, Kuya kufuneka wenze oku kulandelayo:
Ukujolisa kubantu abafanelekileyo – akunanjongo ukuthumela imiyalezo kubantu abangenamdla kuwe okanye abangahambelaniyo nomfanekiso webrendi yakho kunye nobuntu bakho
Bazise ixabiso – abantu abaninzi bajolise kwinto abazama ukuyiphumeza, endaweni yokugxila kwindlela abanokumnceda ngayo umntu abafikelela kuye
Yamkela ukwaliwa – Kuza kufuneka uthumele imiyalezo emininzi kwaye uninzi lwazo luya kulahleka uphawu lwayo, zilungiselele ukwamkela ukwaliwa
Hlala uzinikele – kuya kufuneka uyenze kwaye ungayeki, nkqu ebusweni bokwaliwa rhoqo nokungazi Ngoku ukuba unoluvo olusisiseko lwendlela oqhubeka ngayo, masingene kwiinkcukacha.
Ukujolisa kubantu abaLungileyo
Ukuze ufumane iziphumo ezilungileyo, Kuya kufuneka ujolise kwiiakhawunti ezinxulumene nomxholo wakho. Kutshanje sipapashe inqaku malunga nendlela yokufumana ngokukhawuleza iiakhawunti ezintsha kwi-niche yakho., funda ngokukhawuleza ukuba ufuna nje iiakhawunti ezininzi ukuze uziphathe.
Unokusebenzisa indlela enzulu ngakumbi, ivuliwe ukukhangela i-hashtag okanye indawo enxulumene niche yakho kunye nokuphonononga iiakhawunti nganye nganye ukuze uqhakamshelane. Ukwenza njalo, zama ukungazikhathazi kakhulu ngenani labalandeli, kodwa endaweni yoko jolisa kwinqanaba lokuzibandakanya kunye nomgangatho womxholo.
Endaweni yokuthumela amakhulu eMiyalezo ecela into enye, Endaweni yoko zama ukufumana indlela yokunyusa ixabiso lale akhawunti. Kungaba lula njengokubanika umxholo, thumela iisampulu, okanye ubabonelele ngeendlela zokukhuthaza.
Olu khetho lokugqibela lunokuba lunomdla ukuba unenani elikhulu labalandeli abakwi-intanethi kwamanye amaqonga anjengewebhusayithi yakho okanye i-Facebook., kodwa ukuba uphume kwi-Instagram. Banike ixabiso elongeziweyo endaweni yokuba ubacele into, kwaye ungafumanisa ukuba ezi akhawunti zihlangabezana neemfuno zakho ngcono kakhulu.
Kuya kufuneka uthumele imiyalezo emininzi ngaphambi kokuba ufike naphi na, kwaye kuya kubakho okuninzi ukwaliwa kunye nezithuba ezingakhathalelwanga. Into ephambili ayiyikuthatha ngokwakhe, usenokuba uzifumene ngexesha elibi okanye, ukuba bafumana imiyalezo emininzi, Basenokungaboni umphathi jikelele. Zama ukudlala amanani kwaye ungavumeli ukwaliwa kuchaphazele, izakuthatha ixesha phambi kokuba abantu baqale ukuphendula kuwe.
Ukulandela icandelo elidlulileyo, Kuya kufuneka uthumele imiyalezo emininzi kwaye eyona nto ibaluleke kakhulu onokuyenza kukuzibandakanya kwimisebenzi yakho. Kusenokufuneka uthumele imiyalezo eli-100 ngaphambi kokuba umntu aphendule kwisicelo sakho, okanye mhlawumbi 1000, kodwa ayinamsebenzi kuba ihlala isenzeka ekugqibeleni.
Into elungileyo yile, kuxa sele ubambisene engxoweni, ungayisebenzisa ukulungiselela wena ukufumana abanye. Ungaxelela abathengi bakho : “Ndisebenza nalo mthengi kule projekthi, Bendinethemba lokukubandakanya nawe”.
Inokuba ngumthethathethwano omkhulu kwaye inokukwenza ube nomdla kubantu abaninzi., yintoni enokubakho kwiqhwa kwimisebenzi yakho yenethiwekhi.
Izizathu ezi-5 kunye nendlela yokuyilungisaI-Instagram Hashtag Isixhobo sokuKhangela
Izizathu ezi-5 kunye nendlela yokuyilungisaWazi njani ukuba umntu othile ukuThintele kwi-Instagram